Roy Keane Oo Sheegay SADDEXDA Xiddig Ee Kaliya Ee Uu Kasoo Reebi Lahaa Safka Haatan Ee Man United - GOOL24.NET
Roy Keane Oo Sheegay SADDEXDA Xiddig Ee Kaliya Ee Uu Kasoo Reebi Lahaa Safka Haatan Ee Man United
January 16, 2022 Apdihakem Omer Adam
Halyeeyga kooxda Manchester United ee Roy Keane ayaa shaaca ka qaaday saddexda ciyaaryahan ee kaliya ee uu kasoo reebi lahaa safka kooxdiisii hore ee wakhtigan kaddib barbardhac niyad jab leh oo ay xalay lasoo galeen Aston Villa.
Keane ayaa la dhacsanayn qaabkii ay Manchester oo hoggaan 2-0 ah haysatay ay ugu ogolaatay Villa inay labadaba ka daba keento.
Kooxda tababare Ralf Rangnick ayaa haatan joogta booska toddobaad ee kala sarreynta Premier League iyaga oo shan dhibcood ka dambeeya kooxda booska afraad ee West Ham United xilli ay kaliya hal kulan guul kasoo heleen afartoodii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka.
50 sano jirka Irish-ka ah ayuu Jamie Redknapp weydiiyay tirada ciyaaryahanada ah ee uu kasoo reebi lahaa safka ciyaartoyda kooxda haatan jooga waxaana uu doortay kaliya Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes iyo Raphael Varane.
Keane ayaa isaga oo ka jawaabaya su’aasha Redknapp yidhi “Imisa ciyaartoy ayaan sii haysan lahaa ayaad ula jeedaa miyaa?, anigu ma garanayo, dhab ahaan ma garanayo.”
Kaddib hadalkaas ayuu David Jones oo ah daadihiyaha Sky Sports ku cadaadiyay Keane haddii uu Fernandes sii haysan lahaa waxaana uu yidhi “Haa, ala haa Bruno, dadku way jecel yihiin Cristiano.”
“Waxaad haysataa Varane, waxa halkaas jooga dhawr ciyaartoy oo da’yar ah oo wanaagsan”, Keane ayaa ka tagay goolhaye David De Gea oo midka xilli ciyaareedkan ugu wanaagsan Man United lagu sifayn karo walow uu amaanay bandhigiisii kulankii Villa ee xalay.